UGigaba nesu lokuqeda olayini abade | News24
UGigaba nesu lokuqeda olayini abade
isithombe: BYRONE ATHMAN UNgqongqoshe woMnyango wezaseKhaya uMnuz Malusi Gigaba ehambele ihhovisi eliseMgungundlovu ngoMsombuluko.
UNGQONGQOSHE woMnyango wezaseKhaya uMnuz Malusi Gigaba usethembise ukuvula amanye amahhovisi ezindaweni ezakhele uMgungundlovu okuyindlela yokunciphisa olayini abade ehhhovisi lalo mnyango eliku-Church Street.
UMnuz Gigaba ukusho lokhu ngoMsombuluko mhla zingama-23 kuMbasa (April) ngesikhathi ehambele leli hhovisi njengoba lihluzwe njenge hhovisi elidinga usizo oluphuthumayo ngenxa yolayini abade ababa khona zonke izinsuku.
UMnuz Gigaba uxoxisane nabaphathi kanye namalungu omphakathi akade ekhona ukuthola ukuthi yiziphi izinkinga abhekana nazo uma bevakashele leli hhovisi.
Ngemuva kokuxoxisana kwakhe namalunguomphakathi uthole ukuthi inkinga enkulu ebhekene nomphakathi waseMgungundlovu ubude bolayini nathembise ukuthi bazozama izindlela ezahlukene ukwenza isiqiniseko sokuthi lokhu kuyaphela.
“Leli hhovisi yilona elikhona eMgungundlovu kanti abantu abaningi balapha kanye nasezindaweni ezakhelene nayo basebenzisa lona nesibona ukuthi iyona inkinga egcina idala ukuthi olayini babe bade kakhulu.
“Sisezinhlelweni zokuthi sikwazi ukuthola abasebenzi abathe xaxa ehhovisini elise-New Hanover ukuze abanye abantu bezokwazi ukuthi baye khona.
“Sibheke ekutheni siphinde sivule amanye amahhovisi kwezinye izindawo ezingaphansi koMgungundlovu ukuze abantu abaningi bezochithekela khona.
“Lento yokuthi kube khona olayini abade angeke size siyibekezelele siwumnyango.
“Lena yimpi esizoyilwa futhi sizoyiwina. Angiyithandi lento engiyizwile ukuthi kukhona umuntu osuke ngehora lesihlanu ekuseni lapho ehlala khona kodwa sekuze kwashaya ihora leshumi kwayima esizakala.
“Akekho umuntu ekumele ahlale emahhovisi ethu isikhathi esingangamahora amabili okanye ngaphezulu ngaphandle kokusizakala.
“Abantu abaningi bagcina sebephoqeleka ukuba balove emsebenzini ngoba befuna ukuya emahhovisini oMnyango wezaseKhaya ngenxa yolayini abade.
“Esikhathini esingangonyaka kusukela manje sizobe silwa le nkinga yolayini abade. Lolu daba yilona oluzoba seqhulwini ezintweni esizilungisayo emnyangweni wethu.”
Uphinde waveza nokuthi basezinhlelweni zokusebenzisana namabhange ukuze labo bantu abafaka izicelo zomazisi abangamakhadi [smart card]bakwazi ukuzifaka emabhange ukuze kuzoncipha isibalo sabantu abaya emahhovisini omnyango.